Xasan Sheekh Oo Muqdisho Kusoo Laabtay, Soo dhaweyntiisa oo ay ka dhex Muuqdaan Indha Cadde iyo… (Sawiro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo noqday kadib safar qaatay labo maalin oo uu ku tagay dalka Masar, halkaasi oo uu kula soo kulmay madaxda dalkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa Garoonka kusoo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Wasiiro kamid ah Xukuumadii hore ee Baarlamaanka kalsoonida kala noqday.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lagu sii diyaariyay Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa intaasi kadib waxaa loosoo galbiyay Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo loo xiray wadooyinka Madaxtooyada ilaa Garoonka diyaaradaha Muqdisho isku xira.
Hogaamiyaha dalka Soomaaliya ayaa dalka Masar kula soo kulmay madaxda dalkaasi oo ay ka wada hadleen taageerada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dib udhiska dalka.
Xilliga madaxda ay soo dagayaan ayaa waxaa la xiraa wadooyinka Madaxtooyada soo gala, waxaana taasi sii dheer in wadada sayidka maalin waliba la xiro oo dadka ay dhibaato ku qabaan isticmaalka wadadaasi, maadaama muhiim ay u tahay qaybaha bulshada.
Gen. Qaafoow oo sheegay inay dagaal ku dileen Sarkaal Shabaab ka tirsan, kuwa noolna ay gacanta ku hayaan
Taliska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed Qaybta 12-ka April ayaa shaaca ka rogay inay dileen Sarkaal ka tirsanaa ciidamada Ururka Shabaab, sidoo kale qaar kale oo nool ay gacanta ku dhigeen ciidamada Dowladda.
Gen. Maxamuud Maxamed Qaafoow Taliyaha Qaybta 12-ka Apriil oo la hadlay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay dagaal ku dileen Sarkaalkaasi, dagaalkaasi oo ka dhacay inta udhaxeysa Buulo burde iyo Jalalaqsi.
Qaafoo wuxuu sheegay in ciidamada Shabaab ay soo qaadeen ilaa 3 weerar ciidamada dowladana ay iska caabiyeen oo dagaaladaasi ay ku dileen ilaa 7 nin oo Shabaab ka tirsanaa oo uu ku jiro Sarkaal Amiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Sheekh Cali Yare, isaga oo hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada xooga dalka ay ka dhaawacmeen saddex askari intii dagaaladaasi lagu jiray.
Sarkaalkaan ciidamada Milateriga Soomaaliya kamid ah wuxuu kaloo ku waramayaa in ciidamada Dowladda ay nolol ku qabteen labo nin oo Shabaab ka tirsan, dhawaana ay Warbaahinta usoo bandhigi doonaan.
Taliyaha Qaybta 12-ka Apriil ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, wuxuu sheegay in ciidamada ay wadaan howlgalo ka dhan ah Ururka Shabaab oo ciidanka ay gaarayaan deegaano cusub oo Shabaab laga saarayo.
Wuxuu wacad ku maray in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgalada Shabaabka ka dhanka ah, islamarkaana wuxuu ku goodiyay in Shabaab ay ka nadiifin doonaan inta udhaxeysa Jalalaqsi iyo Buulo burde.
Ciidamada Dowladda, ayaa Isniintii waxay si buuxdo ula wareegeen deegaanada Xero Lugoole, Raaxaale, Buurweyn, Miir-gab iyo Jar, waxayna intoodu badan hoos taggaan oo ay ka tirsan yiiin Degmada Jalalaqsi, deeganadaan ayaa waxaa ku sugnaan jiray ciidamada Ururka Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in Magaalada Buulo burde xoog lagu gaarsiiyo raashin gar-gaar ah oo Dowladda ugu talo gashay dadka ku nool Buulo burde, gar-gaarkaasi ayaa ciidamada dowladda waxa ay kasoo kaxeeyeen Magaalada Jalalaqsi, welina lama gaarsiin Magaalada Buulo burde.
Korneyl Aadan Rufle “Ciidamada aan u dirnay Degmada Baaraawe waa 5 askari oo kaliya, ee maaha 100 askari”
Korneyl Aadan Axmed Xersi (Aadan Rufle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xooga ee Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, ayaa wuxuu beeniyay in ciidan la socday laba doomood, ay habeenkii Isniinta gaareen Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamadaan oo tiradoodu lagu sheegay 100 askari, ayaa waxaa la sheegay inay ka soo amba baxeen deegaanka Goobweyn, oo 11km u jirta Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hoose ee Dowladda C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa wuxuu tilmaamay in ciidan 100 askari gaaraaya, oo la socday laba doomood ay soo gaareen Dekeda Degmada Baraawe, isla-markaana ay baarayaan waxa keenay inay yimaadaan Degmadaasi.
Korneyl Aadan Axmed Xersi oo arrintaasi ka hadlaayay, ayaa yiri “Ciidamada aan u dirnay Degmada Baaraawe waa 5 askari oo kaliya, ee maaha 100 askari, wax ka jiraa lama arko in ciidan intaa le’eg aan u dirno Degmada Baraawe.”
Markale, ayuu yiri “Ciidamadaan waxay wateen dooni qura ee laba maaha, waxayna Goobweyn ka soo qaadeen nin askari ah, oo askari kale ku dilay deegaankaasi.”
Sidoo kale waxa uu yiri “Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayaa inaga soo codsatay in aan askarigaasi ku soo wareejino, meesha inoogu dhow ee aan ugu wareejin karnana waxay noqotay Degmada Baraawe. Askariga waxaa lagu magacaabaa Maxamed Ibraahim Aadan.”
Korneyl Aadan Rufle oo la hadlay alldhacdo.com, ayaa xusay in Taliska Ciidanka Xooga ee ku sugan Degmada Baraawe, ay ku wareejiyeen askariga dilka ka geystay deegaanka Goobweyn.
Saraakiisha Ciidanka Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaan si rasmi ah kaga hadlin wararka is khilaafsan ee la xiriira ciidanka soo gaaray Degmada Baraawe, ee ka soo ruqaansaday Goobweyn.
Socdaalka Xasan Sheekh ee Masar iyo saameynta xiriirka Ethiopia iyo Turkiga
Inkastoo ay DF Somalia uu xiriir fog kala dhexeeyo Dowlada Turkiga, ayaa waxaa hadana soo ifbaxeyso in Turkiga uusan ku qanacsaneyn in Somalia ay xiriir wanaagsan la yeelato Masar.
Dayip Erdogan oo ah Madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa taariikhda markii ugu horaysay booqasho ku yimid dalka Somalia iyadoo booqashadaas wixii ka dambeeyay Turkigu gargaar iyo mashaariic horumarineed ku soo faraqay Somalia inkastoo oo aysan mashaariicdan ahayn mid dalka wada gaartay.
Haddaba waxaa xusid mudan in Dowlada Turkiga ay Somalia ka dhex qabatay waxyaabo muuqda oo aan qarsoomeynin waxaana kamid ah Isbtaalka weyn ee Muqdisho, dhismaha laamiyada Muqdisho dhismo Iskuulo iyo dhaqaale uu ku kabo miisaaniyada dowlada Somalia iyo qaar kale oo badan.
Turkigu dhankiisa wuu ka faa’iiday xiriirka uu la yeeshay Somalia.Waxay Dowlaad Somalia Hay’ad laga leeyahay dalka Turkiga qandaraas kula gashay inay la wareegto maamulka iyo maaraynta gegida diyaaradaha ee Aden Abdulle ee Muqdisho.
Xirrirka Turkiga iyo Masar
Dowlada Turkigu waxay cilaaqaadkii ujartay dalka Masar kadib markii madaxweynaha haatan ee dalka Masar Cabdifatax Siisi oo markaas ahaa taliyaha ciidamada Masar afgambiyay dowladii shacabku soo doortay ee Maxamed Morsi iyo gumaadkii ka dambeeyay ee u gaystay taageerayaashii ururka Akhwaanul Muslimiin.Dhowr jeer ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Dayip Erdogan ka hadlay madaxweynaha xooga ku qabsaday talada dalka Masar Cabdifataax Siisi isagoo sheegay inuusan madaxweyne sharci ah ahayn, arintan oo ka caraysiisay madaxweynaha dalka Masar waxayna sababtay in labada dowladood cilaaqaadkoodii halkaas ku burburo.
Booqashada Xasan Sheekh ee Masar iyo saameynta xiriirka Turkiga iyo Ethiopia
Madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Siisi ayaa casuumaad ufidiyay madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo saxaafada dalka Masar ay shaacisay danta Masar ugu jirta booqashadan.Xasan Sheekh wuu aqbalay casuumadaas wuxuuna hada ku sugan yahay magaalada Qaahira.Inkastoo dowlada Somalia ay tahay dowlad xor ah oo dalkii ay doonto calaaqaad la sameysan karta ayaa hadana waxaa muhiim ah in madaxweynuhu danta dalkiisa miisaamo oo uu ka ilaaliyo wixii danta dalka dhaawacaya ama caqabad u keeni kara.Sida saxaafada Masar laga sii daayay booqashadan waxaa dano siyaasadeed ka leh Masar oo rabta inay ku dheeli tirto xiriirka ka dhaxeeya Ethiopia oo aynu ognahay inay isku haystaan Wabiga Niil.Ethiopia waxaa dalka Somalia ka jooga ciidamo aad ufarabadan waxayna saameyn balaaran ku leedahay siyaasada Somalia.
Waxaa hubaal ah in booqashada Xasan Sheekh aysan farxad gelinaynin Turkiga iyo Ethiopia, hase ahaatee qiimaynta asalka ahi waa waxa uu kala soo noqdo dalka Masar.Hadii Masar ay taageero ugu deeqdo Somalia, mid dhaqaale,mid militari, deeq waxbarasho iyo nooc kasta oo ay noqotaba waxaa markaas la dhihi karaa booqashada Xasan Sheekh ee Masar waa mid faaiido uleh Somalia dantii ay doontaba Masar ha ka lahaatee laakiinse hadi sidii dhici jirtay uu gacma maran kala soo noqdo waxaynu dhihi karnaa waa booqasho lagu guul daraystay oo dhaawacday diblomaasiyadii iyo dantii qaranka Somalia.
Guddoomiye Tarsan oo hadal cajiib ah ka yiri go’aanka XASAN ee ku wajahan lacagta ay siineyso Jaamacada Carabta
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in Jaamacada carabta ay hamineyso inay dhaqaale aad u yar ugu deeqdo DF Somalia oo ay xaajadu ka xun tahay.
Tarsan oo Boggiisa Facebook kusoo qoray hadal kooban oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxa uu ku sheegay in Somalia aysan xiligaani u baahneyn in lagu maslaxeeyo dhaqaale aan sidaa usii buurneyn, waxa uuna Madaxweynaha dalka Xassan Sheekh Maxamuud ka dalbaday inuusan aqbalin lacagahaasi aadka u yar.
Isaga oo dhaqaalahaasi ay bixin doonto Jaamacada Carabta ka hadlaaya ayaa waxa uu yiri ”Madaxweynaha Somalia Hassan Sheikh waxaan ka codsanahayaa in uusan ka aqbalin Jamacada Carabta cheque $1,000,000. ma aha wax ay Somalia ka mudantahay in maanta oo aan ognahay burburka soo gaarey qaranka in Hal Milyan ay soo taagaan. Hal Milyan waxaa bixisey South Sudan marka waa cayb in Jamacada Carabtu ay soo taagto waxaas oo kale oo weliba ay Madaxweynaha u soo dhiibto”
Isaga oo intaa kasii ambaqaadayo hadalkiisa ayaa waxa uu yiri ” Ujeedadooda ma waxay qiimaynahayaan hanka Madaxweynaha Somalia, Xassan yuusan hamin lacagtaasi qiimaha yar”
Sidoo kale, waxa uu Tarsan ka digay in Madaxda DF Somalia ay hankooda ku ekeeyan in la eego lacag Dollar oo kaliya, balse ay muhiimadu tahay in la qiimeeyo deeqaha kaafinkara Bulshada.
Dhanka kale, waxa uu Beesha Caalamka ugu baaqay inay il gaar ah ku eegto dalka Somalia oo dhowr sano ehel u ah burbur
XOG iyo Gorfeyn: Yaa jabin doona oo ka takhalusi doona xasan iyo ….
Kooxda ama xisbigaan la dhaho damul jadiid waa koox isku xiran aqoonyahano iyo ganacsato iyo culumo diin iyo urur haweenba ka dhisan mana ahan inta kaliya ee aad ka aragno shaashada balse waa group gaaraya 100 qof oo isku xiran kana kala soo jeeda dhamaan gobolada soomaalida ay degto ama qabaa,ilada dalka ka kooban yihiin sadexdii jeer ee ay is daba mareen sadex ra,iisal wasaare waxaa xilal ka soo qabtey 49 ka mid ah 100 ka an ku sheegay waxaana harey 51 ka mid ah intaas oo hada ay noqon doonaan wasiiro iyo wasiiro kuxigeeno iyo wasiiro dowlayaal iyo agaasimayaal guud waxayna rabaan in baritoole intaas oo xilal iyo xildhibaano soo qabtey in mar labaad 2016 dib ay usoo noqdaan maadaama soomaalida ay ciseeyaan hebel mar buu madax ahaa ama waa aqoon yahan ama waan ganacsade waxayna ka farsamo badan yihiin kooxihii ama group yadii ka horeeyey ee siyaasada ku fashilmay oo horey dalka usoo qabtey marka waa adag tahay in laga adkaado waxayna wadanka haysan doonaan mudo 20 sano oo soo socota sida lagu qiyaasayo.
Waxaa jira xulufaysi siyaasadeed oo ayagana is xoojinaya oo ay kala kulmayaan maamul goboleedada hada dhisan oo uu hormuud u yahay madaxwaynaha koonfur galbeed Shariif xasan shikh aadan oo hada booqasho ku jooga kismaayo lagana yaabo in uu tago garoowe balse hortiis madaxwaynaha puntland uu tagi doono kismaayo oo halkaas laga damacsan yahay sadexda maamul ee koonfur galbeed iyo puntland iyo jubaland in si faderalism ah iskugu xirmaan dhinaca politicaalka iyo dhinaca ganacsiga waxaana han madaxwayne raba shariif xasan shiikh aadan in u tartamo kooxdaas hadii uu kusoo baxana uu siiyo ra,iisal wasaare saaxibadiisa kale ee kala hogaamiya puntland iyo jubaland waxayna hada wadaan dhaq dhaqaaq siyaasadeed balse kooxdaana kama liitaan oo waxaa laga yaabaa sanad ka dib in ahmed madoobe laga takhaluso maadaama uu waqtigiisi gabaabsi yahey oo xalane uu noqdo madaxwaynaha jubaland ee so socda meesha waxaa ka socota ciyaar siyaasadeed oo ku hoos jirta hiigsiga 2016 iyo jaanisyada oo la isla gaadayo waa daraasaad aan si dhab ah u baarey waana kooxda jabin karta.
Maxaa yeelay sadexdaas maamul hadii baarlamaanka imaan doona ay gacanta ku dhigaan in ay ayagu soo xushaan raga xagooda ka imaanaya Waxaa la filayaa koonfur galbeed waxaa ka imaanaya 60 xildhibaan oo digil iyo mirifle ah 17 xildhibaan oo iskugu jira dir iyo jareer iyo hawiye iyo reer baraawe iyo reer markood isku darkoodana waa 77 xildhibaan oo uu hogaamin doono ruug cadaa shariif xasan shiikh aadan oo maamulkiisa goboladooda ka imaan doona.
Sidoo kale jubaland waxaa ka imaan doonta 8 xildhibaan oo absame ah 2 xildhibaan oo shikhaal ah 2 xildhibaan oo jareer ah 1 xildhibaan oo gaaljacel ah 5 xildhibaan oo mareexaan ah iyo 1 xildhibaan oo awrtable ah iyo 1 xildhibaan oo liiban gishe ama liibaan harti hadba kaad u taqaano ah isku darkoodana waa 20 xildhibaan oo dhinaca ahmed madoobe ka imaan doonta.
Dhinaca puntland waxaa ka imaan doona 18 xildhibaan oo majeerteen ah 4 xildhibaan o laylkase ah 9 xildhibaan oo dhulbahante ah balse 5 ayey ka heli doonaan reer puntland xildhibaanada dhulbahante sido kale 5 xildhibaan oo warsangali ah 1 xildhibaan carab saalax ah iyo 3 xildhibaan oo dashiishe ah ayaguna kuwa abdiwali hogaamin doono ayaa ah 45.
Hadii la isku darana waa 77 koonfur galbeed + 20 jubaland+45 Puntland =142 xildhibaan waa hadey helaan intoodaba fursad ay ku maamulaan xildhibaanada deegaankooda ka imaanaya oo cod one man one vote ama qaab qabiil loo qeebsado waxay noqon doonaan super power jabiya damul jadiid balse ayaguna damul jadiid kama yareestaan ee waxay rabaan sanad ka dib ahmed madoobe booskiisa in uu xalane ku fariisto marka sheekadu waxa weyaan rag is guraaye.
Laakiin ahmed madoobe ma ahan nin siyaasad fog oo hiigsi madaxtinimo soomaaliya ah raba waxuu hankiisa ku kooban yahay madaxtinimadiisa jubaland waana ninka la rabo sanadka 2015 ama 2016 dhexdeeda in laga takhaluso waa qaabka ay ciyaarayaan damul jadiid oo ay rabaan xalane in ay geeyaan waxaana xaga ugaadeenka iyo reerka uu ka dhashay ahmed madoobe kaga shacbiyad badnaadey xalane maxaa yeelay ahmed madoobe hartigii iyo mareexaankii iyo shiikhaashii iyo hawiyihii degana iyo jareertii iyo jiidlihii iyo qabaa,iladii ku heeraarsanaa way naceen oo xoog ayu ku maquuniyey waxayna taasi sahlaysaa in u dagaal galo uu xukunkiisa ku ilaashado ama uu damuljadiid dantiisu ku jirto in uu ku biiro si uu badbaado maxaa yeelay han fog ma lahan ninkaas wax walibana waa laga filan karaa dhinaca kalena markii loo eego abdiwali gaas han wayn buu ka qabaa balse ma uu rabo doorasho madaxwayne in uu galo maadaama uu horey ugu so khasaarey kharash badana uga baxeen umana diyaar aha in uu ku lug go,o xamar oo madaxa ayuu ciida ka ceshanayaa si uusan u niyad jabin hadii uu ku guuldaraystana waxaa macquul ah in puntland mucaarado uga kacaan ayagoo ku eedaynaya in uu puntland u ku gaarayey jaranjaro dantiisa gaar ah oo kursiga villa somalia.
Marka waxuu hankiisa hoos ugu dhigayaa in uu shariif xasan shiikh uu heshiiskiisa aqbalo si uu helo kursi ra,iisal wasaare oo aan tartan loo galeen balse ninkaas hadii u helo u magacaabayo uun isagoo meeshisa jooga ka dibna isagoo xil haya uu uga gudbayo hankiisa villa somalia waa sida uu damacsan yahey abdi wali ee balse ninka la dhaho shariif xasan shiikh ayaa waxu ciyaaraya dagaal siyaasadeed oo farsamo iyo caqliyeen iyo lacag iyo kaarto iyo gogol xaar iyo is miskiineen iyo reer magaalnimo ku dheehantahay sir siyaasadeed in uu ku gaaro kursiga sare ee somalia laga xukumo waxuuna kalsooni ka haystaa reer kiisa digil iyo mirifle oo uu rabo in u ka saaro hanka ay u tartamaan oo kaliya kursiga gudoomiyaha barlamaanka si uu wado cusub iyo baal cusub uu furo digil iyo mirifle wayna ku taageersan yihiin waxuuna xalkii la so aadey oo ugu suurto galaysaa maamulada daaroodka ee jira sida puntland iyo jubaland laakiin dhinaca hawiye kama helayo jixin jix maxaa yeelay waxay rabaan in ay ayagu noqdaan maadama ay awoodii caasimada ay haystaan marka hooshu sidaas bay u socotaa xogta si fiican u dhuux ciyaartuna sanadka cusub ayaan la jaan qaadi doonaa hadii uu eebe idmo.
Laakiin ciyaarta siyaasada waxay is badali kartaa bil ama sanad gudahood waxayna u dhici kartaa dhinac kale maadaama siyaasada soomaaliya ay reer galbeed gacanta ku hayaan oo madaxwaynaha la rabo sidii horey loogu yaqaaneyba uu horey ugu sii calaamadaysan yahey maadama ay dhaqaalaha soomaaliya ku baxa ay ayagu bixiyaan 95% mid maamul goboleed iyo mid dowlada dhaxeba oo ay noqon karto mid ka madax banaan gacmo gacmeenta siyaasiyiinta iyo aqoon yahanada dalka soomaliya
Alshabaab oo laga saaray deegan muhiim u ahaa & Dagaal dhiig ku daatay oo dhacay
Ciidamada Xooga dalka ayaa la sheegayaa in Maleeshiyada Alshabaab ay ka saaren gabi ahaan deegaanka Deynuunaay oo halboole u aheyd Dagaalyahaanada Shabaab.
Deegaanka Deynuunaay, ayaa waxaa dagaal culus ku dhexmaray Cutubyo ka kala tirsan Ciidamada Xooga iyo Maleeshiyada Alshabaab, iyadoona halkaasi uu ka dhacay Khasaaro kala duwan oo soo kala gaaray garabyada uu dagaalka u dhexeeyay.
Ciidamada DF Somalia oo gurmad ka helay dhinaca Magaalada Baydhabo, ayaa waxay laba jiho ka weerareen Shabaabkii qabsaday Deynuunaay, waxayna taasi keentay in Shabaabku ay dib u baneeyaan deegaankaasi.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii Maleeshiyada Alshabaab ay hakat geliyeen isu socodkii dadka iyo gaadiidka, iyagoona digniino kala duwan u jeediyay dadka deegaanka inaysan wax ka iibin karin Ciidamada DF.
Inta la Ogyahay dagaalkaasi ayaa waxaa Maleeshiyada Alshabaab uga dhintay 8 kamid ahaa dagaalyahaanadooda, halka Ciidamada Dowladana looga dilay 5 askari.
Dhanka kale, Dadka deegaanka, ayaa walaac xoogani ka muujiyay mudadii ay Shabaabku heysteen deegaanka Deynuunaay. Saraakiisha Ciidamada Dowladda wax war ah kama aynaan soo saarin weerarkaasi
Saraakiisha ciidamada Dowladda ee Gedo oo sheegay inay duulaan ku yihiin Degmada Baardheere
Saraakiisha ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Gobolka Gedo ayaa sheegay inay duulan ku yihiin Degmada Baardheere oo ka tirsan Gobolkaasi ayna ku xoogan yihiin ciidamada Ururka Shabaab.
Ciidamada ayaa isku diyaarinaya qaadista weerar ka dhan ah Baardheere si ay Shabaab uga saaraan, waxaana howlgalka ciidanka ay doonayaan inay kula wareegaan Baardheere ku wehliya ciidamada Midowga Afrika ee Amisom.
Sarkaal ciidamada Dowladda ee Gobolka Gedo ka tirsan oo lagu magacaabo Siyaad Aadan, ayaa sheegay in ciidamada ay hada kuguda jiraan diyaar garoow ku aadan sidii ay u weerari lahaayeen Degmada Baardheere ee Gobolkaasi Gedo.
Wuxuu sheegay in diyaargaroowga uu ka socda Magaalada Beladxaawo oo ciidamada la diyaarinaayo, sidoo kale waxa uu diyaargaroowga ka socda Degmada Garbahaareey oo ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna ku sugan yihiin.
Ciidamada marka ay dhameeyaan diyaargaroowga wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin qaadista duulaanka ku wajahan Baardheere oo rajo ka muujiyay inay ka saaraan Kooxda Shabaab.
Wararka Baardheere laga helaayo, waxa ay sheegayaan in Shabaab dhexdooda uu khilaaf ka dhex-taagan yahay oo iyaga qudhooda ay is haystaan, taasina waxa ay sii fududaynaysaa in ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ay qabsadaan Magaaladaasi.
Degmada Baardheere oo ah Magaalo weyn, waxaa ka taliya Shabaabka hubaysan oo dhowr mar xukuno kala duwan ku fuliyay Askar iyo dad ay sheegeen in ciidamada ay jaajuus u yihiin, iyadoo ay xusid mudan tahay in Bulshada reer Baardheere caburin Shabaab ay dareemayaan.
Al Shabaab oo sheegay dadkii fuliyay weerarkii Xalane inuu kamid ahaa Muwaadin Kenya udhashay
Ururka Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in dadkii fuliyay weerarkii ka dhacay xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho uu kamid ahaa muwaadin u dhashay dalka Kenya oo kamid ahaa afartii ruux ee weerarkaasi fuliyay.
Ninkaan ayaa lagu magacaabi jiray Salmaan Al-Muhaajir, waxaana laga qaaday Wareysi ka hor inta uusan fulin weerarkii Khamiista ka dhacay xarunta Amisom ee Xalane ee Magaalada Muqdisho.
Wareysiga Salmaan Al-Muhaajir ayaa laga sii daayay Idaacada Andalus ee ku hadasha Afka Shabaab, Salmaan Al-Muhaajir oo marna ku hadlaayay afka Soomaaliga, marna ku hadlaayay afka Sawaaxiliga.
Salmaan ayaa ugu horeyn shacabka Kenya wuxuu usheegay dhibaatada haysata inay tahay gumaadka lagu haayo, wuxuuna ugu baaqay in ay dadka fahmaan dhibaatada lagu haayo oo ay ka dhiidhiyaan ayna la dagaalamaan cid waliba oo aan muslim aheyn.
Salmaan Al-Muhaajir ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay weerarkii Shabaab ay ka geysteen duleedka Magaalada Mandheere oo dad badan ay ku dileen, wuxuuna sheegay in warkaasi markii uu maqlay uu aad ugu farxay in la laayo dad badan oo gaalo ah oo ay ku baxaan gacanta ciidamada Shabaab.
Rasmi ahaan magaca ninkaan loo yaqaano waa Cumar Saciid, laakiin Shabaab dhexdooda waxaa looga yaqaanaa Salmaan Al-Muhaajir wuxuu kula dar-daarmay shacabka Kenya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb-qaataan dagaalka Jihaadka ah ee ka socda dalka Soomaaliya iyo gudaha dalka Kenya.
Weerarkii ka dhacay Xarunta Amisom ee Xalane ee Magaalada Muqdisho khamiistii lasoo dhaafay ayaa waxaa fuliyay afar ruux oo Shabaab ay magacyadooda ku sheegeen.
1 Ibraahin Salaad oo loo yaqaanay Aadam.
2:Maxamed Sheekh oo isna loo yaqaanay C/majiid.
3: Cumar Saciid oo loo yaqaanay Salmaan Al Muhaajir
4: Nuur idiris oo ahaa Amiirka hogaaminaayay Weerarka.
Shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ugu aargudayeen Hogaamiyahoodii la dilay Sanadkaan.
Baarlamaanka Somaliya oo looga warbixiyay Suxufiyiinta ku xiran Magaalada Muqdisho
Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Somaliya oo Isniintii kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay kaga doodeen miisaaniyada Xukuumadda ee sanadka 2015-ka, iyadoo dhinaca kalana warbixin laga siiyay labada Suxufi ee ku xiran Xabsiga Dhexe Xamar.
Xildhibaan Maxamed Axmed Kulmiye oo Baarlamaanka u akhriyay warbixinta ku aadan Suxufiyiinta iyo xariga Idaacadaha Shabelle & SKY, ayaa waxa uu xarigoodu ku tilmaamay mid sharci daro ah.
“Wariye-yaal ayaa xiran muddo dheer, laga soo billaabo 15-kii bishii August ilaa hadda, iyaga iyo Idaacadihii ay ka shaqeynayeen ee Shabelle iyo SKY weli way xiran yihiin. Cid la hadashay mudada ay xiran yihiina ma jirto.” Ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Axmed Kulmiye.
Sidoo kale wuxuu yiri “Ma jirto wax Maxkamad ah oo la horkeenay inta ay xiran yihiin, sharci daro ayay ku xiran yihiin, hay’adaha xuquuqul insaanka cid kala hadasho xariga Suxufiyiinta ma jirto.”
Markale ayuu yiri “Sidaas ayaa sharciga loogu tumanayaa, anagana meeshaan ayaa iska fadhinaa, haddii sharciga lagu tumanaayo, maxaan meeshaan ka faadhinaa?”
Waxa uu intaa ku daray “Ma jirto wax dembiyo ah oo Wariye-yaasha ay lee yihiin, haddii ay lee yihiin Maxkamad ayaa la horkeeni lahaa, waa awood sheegasho waxay ku xiran yihiin.”
Dhanka kale warar madax banaan, ayaa waxay sheegayaan in 5-ta bisha Janaayo Maxkamadda Gobolka Banaadir la horkeeni doono Maxamuud Maxamed Daahir (Carab) iyo Maxamed Bashiir Xaashi, oo ka kala tirsan Idaacadaha Shabelle iyo SKY.
Ehelada Suxufiyiinta oo ku booqday Xabsiga Dhexe Xamar, ayaa waxay u sheegeen inaysan sugeynin wax Cadaalad ah, haddii ayba xiran yihiin in ku dhow shan bilood, wax Maxkamadna aan la horkeenin mudadaasi.
Mareykanka oo weerar la beegsaday hogaamiye sare oo Al-Shabaab ah
Milatraiga Mareykanka ayaa xalay duqeymo diyaaradeed la beegsaday hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee dalka Somalia, deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ma aysan shaacin haddii weerarka lagu guuleystay in lagu dilo bartilmaameedkiisa iyo in kale.
Inkasta oo Mareykanka uu qofka weerarka lala beegsaday ku sheegay kaliya hogaamiye sare, haddana ilo madax banaan ayaa Jornalizem u sheegay in loo badinayo inuu ahaa hoggaamiyaha cusub ee Shabaab Axmed Cumar Abu Cubeyda, oo sidoo kale loo yaqaan Axmed Diiriye.
“Illaa iyo iminka waxaan xaqiijin karnaa in dad rayid ah aysan waxyeelo kasoo gaarin weerarka” ayuu yiri Rear Admiral John Kirby oo ah xoghayaha warfaafinta Pentagon-ka.
Weerarka ay qaadeen diyaaraha Mareykanka ayaa kusoo aaday maalmo kadib markii Sakariye Ismaacil Axmed oo ka tirsanaa Alshabaab uu isku dhiibay dowlada Soomaaliya, waxaana madaxiisa horay loo dul dhigay 3 Milyan oo doolar.
“Wali waxaan baareynaa natiijada weerarkaasi” sidaasi ayuu yiri John Kirby. Wuxuu sheegay in baaritaano kadib ay faahfaahin ka bixin doonaan qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi.
Alshabaab ayaanan wali ka hadlin duqeynta Mareykanka uu sheegay inay ka geysteen degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
Wararka la xiriira weerarkii xalay ka dhacay Saakow, ayaa la filayaa in saacadaha soo socda laga helo faah-faahino dheeri ah, kuwaas oo aan idin la socodsiin doonno Insha Allah.
BARRE Hiiraale oo ku dhacay bohoshii uu u qoday wasiir FAARAX C/QAADIR
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in Hogaamiyaha Maamulka KMG Jubba Axmed Madoobe uu saraakiisha Ciidamada Militeriga maamulka ku amray inay hub ka dhigis ku sameeyaan Ciidamada Col. Barre Hiiraale ee ku xareysan xiro ku taala Magaalada Kismaayo.
Ciidamadaani la sheegay in hub ka dhigista lagu sameynaayo, ayaa waxa ay kismaayo ku gaaren Heshiis dhexmaray Hogaamiye Axmed Madoobe iyo Col. Barre Hiiraale, iyadoona heshiiskaasi uu abaabulkiisu lahaa Sii haayaha wasaarada Dastuurka Faarax C/qaadir.
Sidoo kale, warar kaasi ka duwan ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu Ciidamadaasi ka mamnuucay inay iridka uga soo baxaan Xarunta, kadib markii uu ka cabsaday inay sameeyan falal lid ku ah Ammaanka Kismaayo maadaama laga dhigaayo hubkii ay isku difaacayen.
Faarax C/qaadir iyo Axmed Madoobe oo siyaasad ahaan isku dhow, ayaa suuragaliyay in gabi ahaan masraxa mucaaradnimo laga saaro Barre Hiiraale waanatan sababtay in Madaxweyne Xasan uu Axmed madoobe u aqoonsado Madaxweynaha maamulka jubba, xili uu weli taagan yahay Khilaafka maamulka iyo beelaha Kismaayo wadadega.
Dhanka kale, waxaa hada magaalada Muqdisho ku go’doonsan Col. Barre Hiiraale oo isagu laga ilaalinaayo inuu dib ugu laabto deegaanka Goobweyn sababo la xiriira cabsi laga qabo inuu dib isu abaabulo
Cumar Cabdrashiid hal caqabad ay ka heysato dhanka beesha HABAR-GIDIR
Warar kala duwan oo aan ka heleyno dhanka Madaxtooyada Somalia ayaa sheegaya in R/W CCC Sharmaarke uu aad uga walaacsan yahay saameynta ay xukuumadiisu ku yeelan karto haddii ay dhacdo in Golaha wasiirada laga dhex saaro Wasiirka Amniga Qaranka Somalia Khaliif Erag.
Erag ayaa miisaan ku dhex leh Golaha Wasiirada, waxaana haddii dib loo magacaabi waayo meesha ka bixi doona dhamaan Howlihii lagu xaqiijinaayay Ammaanka Muqdisho ee uu haye, iyadoona ay xusid mudan tahay in Erag uu gacanta ku dhigay mudada uu xilka hayo Kunteenaro Hub, Daroogo iyo Horjoogayaal Alshabaab oo ku dhuumaaleysanaayay gudaha Magaalada Muqdisho.
R/W CCC oo ka baaran dagaaya in Khaliif Erag uu saameyn ku yeesho amaan darida dalka, ayaa waxa uu arrintaasi la tashiyo kala sameeyay Xildhibaano iyo Odayaal dhaqmeed kuwaasi oo uu u sharaxay miisaanka Khaliif Erag iyo suuragalnimada haddii ay dhacdo inuu xil ka waayo Xukuumada cusub falalka uu fulinkaro, ayaa waxaa arrintaasi kasoo horjeestay Xildhibaanada iyo Odayaasha Beesha Habar-Gidir oo iyagu dhex dooda ku muransan shaqsiga ay u igman lahaayen matalida Xubinta ay ku dhex leeyihiin Xukuumada cusub.
R/W CCC Sharmaarke oo ka cabsi qaba in Khaliif Erag uu si dadban uga qeybqaato Amaan darida ayaa waxa uu isku dayay inuu Beesha Habar-Gidir ku qanciyo in Erag uu ugu soo daro mar kale Xukuumada Cusub, waxaana kasoo horjeestay tiro Odayaal, waxa ayna taasi Caqabad ku noqotay Ra’isul wasaare Cumar Cabdirashiid oo isagu u baqaayo in amaandari ay ka dhalato xil ka qaadista Khaliif oo Khibrad u leh la dagaalanka Alshabaab.
Waxaa sidoo kale Cumar Cabdirashiid ay caqabad ka haysataa dhanka wasiirkii hore ee amniga Cabdikraain Guuleed oo doonaya xilka wasiirka arrimaha gudaha, taa beddelkeedna wasiirka amniga la siiyo Sambaloolshe. Guuleed waxa uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha.
Beesha Habar-Gidir ayaa weli ku muransan shaqsiga ay usoo xulan lahaayen Wasiirka, waxaana socda kulamo ay isaga soo dhex saarayaan shaqsigaasi, inkastoo Madaxweyne Xasan uu xilkaasi la damacsan yahay inuu u dhiibo C/kariin Guulleed oo hadda ah La-taliyaha dhanka Siyaasada u qaabilsan Madaxweyne Xasan.
2 magaalo oo Somalia ku taal oo dadka ku nool ay idilkood halis ugu jiraan
Wararka ka imaanaya Degmooyinka Xudur iyo Waajid ee Gobolka Bakool, ayaa kusoo waramaayo in Maleeshiyada Alshabaab ay sii laba jibaartay go’doonkii ay ku hayeen Bulshada halkaasi ku nool.
Wararku waxa ay sheegayan in Kooxda Al Shabaab, ay ka biyo diidan tahay weli in gaadiidka ganacsiga iyo kuwa kale ee rakaabka ay gudaha u galaan Degmooyinkaasi.
Maleeshiyada ayaa waxa ay sidoo kale diideen in Degmooyinkaasi ka soo baxaan gaadiidka kale ee gudaha ugu jira.
Sidoo kale, Maleeshiyada ayaa waxa ay arrintaani ku dooneysaa in la waayo dad ay maamusho Dowladda Somalia oo Degmooyinkaasi ku nool, Waxayna tani ku soo aadeysaa, xili bilo ka hor laga qabsaday Al Shabaab, balse ay hada ku joogan qaab dhuumaaleysi ah.
Arrintaani ayaa waxaa warbaahinta gudaha uga warbixiyay Maxamed Macalin Axmed oo ah Gudoomiyaha Degmada Xudur ee Maamulka Bakool, waxa uuna sheegay in shacabka meesha ku nool ay caqabado kala duwan kala kulmayaan Maleeshiyaadka Alshabaab.
Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in sicir barar daran uu ka jiro Degmadiisa, wuxuuna Dowladda Somalia ugu baaqay in shacabka laga dulqaado Alshabaab.
Dhanka kale, DF Somalia ayaa waxaa dhawaan lagu eedeeyay in ay indhaha uun ka daawato Al Qaacidada Somaliya, oo dhibaatayn ku heysa shacabka Somaliyeed ee ku dhaqan dhulkii laga eryay Shabaabka.
Muungaab “Ra’iisul Wasaare, Wasiirada aad keeni doontid Madaxweynaha yeeysan Madaxtooyada ku cariirin Degmooyinka hasoo degaan”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa ugu baaqay Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaake, Wasiirada uu soo dhisi doono inay degaan Degmooyinka Gobolka Banaadir oo badi Wasiirada aysan degin.
Muungaab ayaa wuxuu sheegay in Wasiirada imaan doona laga rabo inay degaan Degmooyinka Magaalada Muqdisho oo aysan isku koobin kaliya xarunta Madaxtooyada iyo xayndaabkeeda sida hadalka uu udhigay.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ayaa wuxuu sheegay in Xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono la rabo Wasiirada inay noqdaan kuwa geesiyaal ah oo Hogaamiya Xukuumadda, sidoo kalena ku dhiirada inay degaan Degmooyinka kala duwan ee Magaalada Muqdisho.
“Ra’iisul Wasaare waxaan kaa codsanaynaa inaad keentid Wasiiro Geesiyaal ah oo Magaalada gudaheeda soo dhex-dega oo Madaxweynaha aan ku cariirin xarunta Madaxtooyada”Ayuu yiri Muungaab oo ka hadlaayay Xaflad soo dhaweyn ah oo xalay Ra’iisul Wasaaraha loogu sameeyay Magaalada Muqdisho.
Muungaab oo muujinaayo in Muqdisho ay tahay meel ammaan ah ayaa wuxuu sheegay in Madaxda dowladda uu umuujiyay in amni ay tahay Magaalada oo wuxuu sheegay inuu degay Bartamaha Magaalada, balse aysan jirin ilaa hada cid ku dayatay oo Bartamaha Magaalada soo degtay.
Inta badan Wasiirada iyo Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa degan wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho iyo xayndaabkeeda, waxaana adag in masuul dowladda ka tirsan uu dego wadada sodonka iyo wadnaha oo halbowlayaasha Magaalada kamid ah.
Dhismaha uu degan yahay Duqa Muqdisho ee ku yaala Degmada Heliwaa ayaa xilliyada qaar waxaa soo weerara xoogag ka tirsan Shabaab oo arbushaad ka sameeya halkaasi.
Dastuurka Puntland oo luuqadda Ingiriiska loo badallayo
Golaha wasiirrada dowladda Puntland ayaa isku raacay in luuqadda Ingiriiska lugu qoro dastuurka Puntland oo xilligaan ku dhigan Af-Soomaali,sida waxaa lugu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay shir ay wasiirradu ku yeesheen madaxtooyada.
Ujeedka loo badalayo waxuu ku sheegay madaxweynaha Puntland oo shirka ka hadlay dastuurka Puntland qoraalkiisi in in badan laga fiirsaday ,isla markaana hadda la joogo xilligii loo gudbi lahaa wajiyada xiga ee ah in luuqado kale oo qalaad lagu qoro.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa u soo jeediyay wasaaradda arrintan ku shaqada leh in ay dadajiso bilaabidda in luuqadda Ingiriiska loo badallo dastuurka Puntland.
“Goluhu waxa uu isku raacay in loo xulo arrintan khuburo aqoon u leh xagga erey bixinta iyo qaab qoraaleedka qaanuunka si aan dastuurka loogu adeegsan fasiraad qaldan “ayaa lagu yiri war-mutiyeed shirka ka soo baxay.
Sidoo kale,golaha wasiirrada ayaa ka hadlay qorshaha laga sugayo dowladda uu hoggaamiyo Cabdiweli kaaso ah hirgalinta hanaanka asxaabta Puntland oo ka mid ahayd ballanqaadka dowladda.
“Puntland waxaa ay u dhaqaaqaysaa dhinaca hanaanka asxaabta fura,sidaa darteed waxaa golaha xukuumadda ee dowladda Puntland ay si adag uga doodeen nimaadka kala xadaynta degmooyinka Puntland kuwii hore iyo kuwa dambe,waxaana golahu u diray wasaaradda arrimaha gudaha qorshe kooban inay kusoo celiso golaha shirarka dambe,”ayaa lugu yiri qoraal ka soo baxay shirkii ay Khamiistii yeesheen wasiiradu.
Xukuumadda ayaa ku guda jirta la xisaabtan oo ay wasaaraduhu ku soo bandhigayaan howlahooda shaqo muddada ay shaqeynayeen oo sannad ay maalmo uga dhiman-yihiin.
Madaxweyne Gaas ayaa la sugaya marka ay u buuxsanto sannad maalmo kaddib inuu si guud uga hadlo hirgalka dowladiisa iyo qorshayaasha ay qaban doonan sanadka cusub.
Kenya oo isku dayday inay DF ka xoogto hogaamiyihii Shabaab ee is-dhiibay iyo R/W CCC tallaabo muhiim ah qaaday
Ciidamada Militariga Kenya, ayaa waxay isku deyeen in ay DF xoog kula wareegaan Sakariye Ismaaciil Xersi, oo ka tirsanaa Saraakiisha sar sare ee Ururka Al Shabaab ee Mareykanka lacagta dul dhigay madaxiisa.
Ninkaan waxaa lagu qabtay guri ku yaala afaafka hore ee Degmada Ceelwaaq, xilli xogtiisa ay helayn Ciidamada Dowladda Somaliya, waxaana gacanta ku soo dhigay ciidan uu horkacaayay Taliyaha Ciidanka Xooga ee Gobolka Gedo Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey.
Ciidanka Militariga Kenya oo fariisimo ku leh Degmada Ceelwaaq, ayaa waxay isku gadaameen hoyga uu Degmadaasi ka degan yahay Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey, xilli lagu haayay Sakariye Ismaaciil Xersi.
Korneyl Cabaas, ayaa ka biyo diiday in ninkaasi uu ku wareejiyo Ciidamada Kenya, waxaana la soo sheegayaa in qarka ay u fuulleen inay wada dagaalamaan, hase ahaatee waxaa kolkii dambe arrintaasi ka war helay oo soo fara-geliyay Taliska Ciidanka Amisom ee Magaalada Muqdisho.
Taliska Amisom, ayaa Ciidamada Kenya ku wargeliyay inaanay ninkaasi la wareegi karin, isla-markaana ay hujuumka ka dulqaadaan hoyga Korneyl Cabaas, waxayna taa horseeday in xaaladu ku soo laabato mid caadi ah.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegaya in Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, uu la xiriiray Xarunta Ciidamada Amisom ee Magaalada Muqdisho, markii ay soo shaac baxday in Ciidamada Kenya ay isku gadaameen hoygii lagu haayay Sakariye Ismaaciil Xersi. Ra’iisal Wasaaruhu wuxuu Amisom ka dalbaday in si deg deg ah, ay Ciidamada Kenya u joojiyaan dalabkooda ku aadan in lagu soo wareejiyo Sakariye.
Ciidanka Kenya, ayaa barqanimadii shalay Ciidamada Dowladda Somaliya ka codsaday in lagu soo wareejiyo ninkaasi, hase ahaatee waa ay ka biyo diideen. Waana taa midda keentay in shalay galab ay isku gadaamaan hoygii lagu haayay ninkaasi.
Dowladda Mareykanka, ayaa saddex milyan oo lacagta Mareykanka ($3,000,000) dul dhigtay madaxa Sakariye Ismaaciil Xersi, bartamihii sanadka 2012-ka, xilligaa waxay aad isugu wanaagsanaayeen Amiirkii Ururka Al Shabaab ee la dilay Axmed Cabdi Aw Maxamed (Godane). Markii dambena waxa uu ka mid ahaa Saraakiishii Shabaabka ee uu go’doomiyay Ina Godane.
Cabdi Wali Gaas oo ku hor ceeboobay shacabka Soomaaliyeed kaddib markii uu la soo baxay dhaqamo yaab badan
Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa dhawaanahan la soobaxay dhaqamo aan hori loogu arag Siyaasiyiinta iyo Madaxda Soomaalida, kuwaas oo xittaa aan horay loogu arag Qabqablayaashii dagaalka xilli Cabdiwali laga filaayey in uu gacan ka geysan doono dhismaha qaran Soomaaliyeed oo mid ah, Islamarkaana degan.
Habdhaqanadan lala yaabay ee uu Cabdiwali la soo baxay , ayaa niyad jab badan ku riday dad badan oo Soomaaliyeed oo aan Aniguba ka mid ahay, Kuwaas oo runtii aad ugu hanweynaa maadaama uu yahay nin mutacalim ah, islamarkaana horey u soo qabtay jagooyin sar sare sida wasiir,ra’isulwasaare iyo u tartamid madaxweyne.
Bal inta aanan sheegin dhaqamada lala yaabay ee uu Cabdiwali la soo baxay, aan marka hore sheego sida loo arkaayey Isaga. Dad badan oo Soomaaliyeed, ayaa u arkaayey Cabdiwali in uu yahay Shaqsi aqoonyahan oo wax ka badbaadin kara dalkan qarka u saaran in uu u kala go go’o gobolo yar yar oo ay kor ka maamulaan dowladaha ah dariska sida Itoobiya oo kale.
Maadaama uu Cabdiwali horay u soo qabtay xilal sar sare sida ra’isulwasaare oo kale, Islamarkaana uu leeyahay aqoon fiican, Waxa ay Shacabka Soomaaliyeed ka filaayeen, in uu u istaagi doon sidii la isugu keeni lahaa Bulshadan kala irdhowday, Islamarkaana loo dhisi lahaa qaran Soomaaliyeed oo mid ah. Tusaale ahaan, dad badan ayaa ku farxay markii Cabdiwali loo doortay Madaxtweyninimada Puntland, Iyagoo markaasi u arkaayey in uu wax ka qaban doono xiriirka aan fiicneyn u dhaxeeyey Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland..
Dadkani, ayaa aaminsanaa in aqoonta iyo waaya-aragnimada Cabdiwali ay abuuri doonto xiriir wanaaagsan oo mar kale dhexmara Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland laakiin nasiibdaro, waxaad moodda in uu xaalkuba ka daray sidii hore oo, uusan Cabdiwaliba wax badan ka duwaneyn Madaxweynihii hore ee Puntland C/raxmaan faroole. Sow ma’ahan Jug jug meeshaada jog.
Waxa ay sidoo kale dadku ka filayeen in uu Cabdiwali gacan ka geysan doono, sidii miis la isugu keeni lahaa Dowladda Federaalka iyo Maamulada kale ee dalka ka jira, si loo helo wadashaqeyn guud oo horseedda in laga baxo dhibaatadan dabadheeraatay. Dhanka kale, waxaa looga fadhiyey aqoonyahan Cabdiwali in uu wax ka qaban doono cabashooyinka iyo cadaaladarada ka dhex jirta Maamulka Puntland, taas oo runtii keeni karta hadaanan la xalinin in ay dhaawacanto midnimada iyo wadajirka Puntland.
Halkii Cabdiwali laga sugaayey, in uu wax ka qabto dhamaan arimahii aan soo xusay, Waxa uu doortay in uu sii xumeeyo xiriirkii awalba xumaa ee ka dhaxeeyey Dowladda Federaala iyo Maamulka Puntland. Tusaale ahaan, marna iskuma dayin in uu Muqdisho tago si loo dhiso xiriir cusub oo dhexmara Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland halku uu dhowr jeer isaga daba noqday Magaalada Adis Ababa,taas oo runtii ah wax lala yaabo.
Tusaale ahaan markii la doortay, waxa uu safaro dhowr ah ku tagay dalal ay ka mid yihiin Itoobiya Jabuuti iyo Yeman,kuwaas oo uu la soo galay heshiisyo kala duwan, Isagoo og in ay taasu tahay sharcidaro, waayo Dowladda Dhexe oo kaliya ayaa awood u leh in ay gasho heshiisyo ceynkaasi oo kale ah. Hadaan si kale u iraahdo, Cabdiwali waxaa uu laba jibaarey dhaqan-xumadii ay caanka ku ahaayeen Maamul Goboleedyada dalka ka jira sida Somaliland iyo Jubaland oo kale,Kuwaas oo runtii lagu wareeray dalka ay ka tirsan yihiin. Haddii aqoonyahankii uu sidan u dhaqmayo maxaa laga filan karaa kuwa kale ?
Waxaasi oo dhan waxaa ka daray, jawaabtii uu Cabdiwali ka bixiyey, heshiiskii dhexmaray Dowladda Federaalka iyo Maamulka Somaliland, Heshiiskaas oo qodobadiisa qaar ay tilmaamayeen in ay Hargeysa noqoneysa xarunta laga maamulo hawada dalka,taas oo runtii ahayd fikrad wanaagsan balse uu Cabdiwali ka horyimid. Mar la weydiiyey Cabdiwali waxa ku jaban arinkaasi, Waxa uu ku jawaabay aqoonyahankii in xaruntaasi loo soo raro Garoowe mar haddiiba laga wareejinayo Muqdisho. Hadaba su’aasha meesha taalaa waxaa weeye, Hargeysa Iyadu Soomaaliya ma’ahan miyaa, Maxayse ku kala duwan yihiin Hargeysa iyo Garoowe ?
Sow ceeb kuma ahan Cabdiwali in uu hadalkaasi ka soo baxo, Isgoo waliba soo noqday ra’isulwasaarihii dalka, Islamarkaana mar u soo tartamay madaxweyninimo ? Runtii, waa wax aad loola yaabo in uu hadalkaasi ka soo baxo shaqsi aqoonyahan ah, islamarkaana soo qabtay mid ka mid ah xilalka ugu muhiimsan ee dalka. Aqooney warkaa ba’. Ma laga yaabaa in uu Cabdiwali mar kale u tartamo madaxweyninimo? waa laga yaabaa ileen xishood ma jiree.
Midda kale, sow ceeb kuma ahan Isagoo aqoonyahan ah in uu u dhaqmo sida hogaamiye kooxeedyadii Juhalada ahaa oo kale, Kuwaas oo wareegi jiray caasimadaha dalalka dariska ah. Tusaale ahaan, waxaan xasuustaa mar uu la haa, waxaan dooneynaa inaan Safaarad ka furano dalka Yeman. yaah umad uu Aqoonyahankeedi sidan yahay maxaa laga filan karaa juhaladeeda ? Walaahi Anigu waan yaabay,war aaway dadkan damiirkooda.
Dhinaca kale, Sow wax lala yaabo ma’ahan in Cabdiwali isku dayo in uu Puntland hoos geeyo Itoobiya, taas oo runtii haddii ay dhacdo sharaf dhac ku ah guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi oo runtii lagu tiriyo dadka ugu qabka badan dadka Soomaaliyeed. Midda kale, maxaa loogu cayaarayaa Sharafta iyo Karaamada Umadda ? Ma sharfbaa in kabo-qaad la noqdo !
Anigu, runtii igama ahan qormadan inaan ceebeynayo Cabdiwali iyo ragga la midka ah, ee waxa ay iga tahay naseexo iyo baraarujin, waayo waa wax loo baahan yahay inaad saxdo walaalkaa marka uu qaldamo. tusaale ahaan, waan ka xumaaday markii uu Cabdiwali ka horyimid in Hargeysa laga maamulo hawada dalka, waayo Hargeysa waa Magaalo Soomaaliyeed oo la mid ah Magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe.
Runtii, waxa aan oron karnaa Cabdiwali waxa uu ku ceeboobay Shacabka Soomaaliyeed hortiisa maxaa yeelay, waxaa laga filaayey wax badan oo wanaagsan maadaama uu horay u soo qabtay mid ka mid ah xilalka ugu muhiimsan ee dalka, Islamarkaana uu yahay aqoonyahan lagu hanweynaa. Tusaale ahaan,Waxa laga filaayey in uu ka shaqeyn doono midnimada iyo wadajirka dalka iyo waliba isku keenista Bulshadan kala irdhowday si loo soo afjaro colaadan dabadheeraatay.
Gaba gabadii, waxaan leeeyahay Cabdiwaliyow wax ka badal habdhaqankaaga, si aad u soo ceshato kalsoonidii ay kugu qabeen Shacabka Soomaaliyeed haddii kale, waxa aad gali doonta liiska lagu qoro dhagarqabayaashii baa’biyey dalkan ee u horseeday burburkan. Ugu danbeytii, waxaan leeyahay aqoontaadu ha noqoto mid keenta midnimo iyo wadajir Soomaaliyeed si looga baxo dhibaatadan dabadheeraatay.
Maxaa kala soctaa SIRTA ka dambeysa socdaalka Shariif Xasan ee Kismaayo?
Ilo wareedyo ka tirsan Maamulka KMG Jubba ayaa inoo xaqiijiyay in socdaalka Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed ee Somalia Shariif Xassan Sheekh Aadan uu yahay mid ku qotoma Siyaasad hoose oo kala dhexeysa Maamulka Jubba.
Ilo wareedka ayaa sheegay in Ujeedka socdaalka Shariif Xassan uu yahay mid ku saleysan in dadka ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ee dega gobolada Jubbooyinka xilal laga siiyo maamulka Jubbaland, maadaama Shariif Xasan uu ogoleysiiyey beeshiisa inaysan sheegan gobolladaas oo ay degaan.
Sidoo kale, ilo wareedka ayaa sheegay in Shariif Xassan iyo Axmed Madoobe ay si gaar ah uga wada hadleen arrinta la xiriirta xil u magacaabista Siyaasiyiin kasoo jeeda Digil iyo Mirif ee deeganka ku ah Jubbooyinka.
Wararka waxa ay sheegayaan in Axmed Madoobe uu si si diiran usoo dhaweeyay, islamarkaana uu balan qaaday inuu ku dadaali doono in maamulkiisa noqdo mid loo dhan yahay.
Booqashada uu ku tegey Madaxweyne Shariif Xasan magaalada Kismaayo ayaa ah tii ugu horeysay ee uu ku tago halkaas tan iyo markii loo doortay hogaanka maamulka Saddexda gobol ee Koofurta Soomaaliya.
Booqashada wafdiga Shariif Xasan ayaa lagu wadaa inay qaadato laba maalmood iyadoona Axmed Madoobe laga filaayo in Maamulkiisa uu kusoo biirin doono xubno kasoo jeeda Digil iyo Mirifle.
Safaarada Ethiopia ee VILLA SOMALIA ku dhex taal iyo wax ka dhex socda
Cumar Cabdirshiid waa ra’iisul wasaarahii saddexaad ee ay yeelato Dawladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan, taas oo labadii ra’iisul wasaare ee ka horeeyey ay xil ka qaadistooda u sabab ahaayeen khilaaf.
Sidoo kale, markii uu iska casilayay xukuumadii hore DFKMG ee Sh. Shariif, waxaa Cumar Cabirashiid Sept 21, 2010 uu yiri “Waxaan isku casiley in aan badbaadiyo Dowladda Federaalka waayo haddii sii socon lahaa khilaafkeenna waxaa dhici lahayd in beesha Caalmka naga duub duubato oo faraha naga qaado”.
Cumar Cabdirashiid ayaa waraysigii ugu horeeyey ee uu bixiyey, kaddib markii mar-labaad loo magacaabay ra’iisul wasaare, waxa uu yiri “Wax Khilaaf ah ma Dhici doono”, waraysigaas oo December 25, 2014 uu siiyey VOA.
Sidoo kale December 24, 2014 kaddib markii ay baarlamaanku ansixiyeen, warsaxaafadeedkii ugu horeeyey ee kasoo baxay xafiiska ra’iisal wasaaraha waxaa lagu xusay in Cumar C/Rashiid “xukuumadiisu noqon doonto mid ay kala dhaxayso wada shaqayn dhamaan Hay’adaha dowaldda, si loo helo xasilooni siyaasadeed.”
Sidoo kale isla goobtii ansixinta waxaa Madaxweynaha DFS uu sheegay “in uu balan qaadayo inay wada shaqayn buuxda dhex mari doonto isaga iyo Ra’iisul wasaaraha tixgalina uu sii doono go’aamada golaha wasiirada isagoona sheegay inuu ku difaacayo sarreynta sharciga.”
Arrimahaas iyo taariikhda taxanaha ah ee xukuumadihii soo maray Muqdisho kaddib 1991, waxay muujinaysaa in xukuumadda cusub maanka ku hayso in khilaafka madaxda sare ay ragaadiyeen horumarkii la gaari lahaa.
In badan oo Soomaali ah ayaa rumaysan in khilaafka madaxda Soomaaliyeed ay gacan toos ah iyo mid dadban ay ku leeyihiinn dalalka deriska qaarkood oo sida ay hore u shaaciyeen aan doonayn dawlad xoog leh oo ka hana qaada Soomaaliya.
Tusaale kooban waxaa ah hadalkii 2003 ee madaxweynahii hore ee Kenya, Moi ee ahaa “dalalka deriska la ah Soomaaliya ay ka cabsi qabeen Soomaaliya oo dib-u-midowda oo barwaaqo ah ay dib u soo noolayn karto sheegashadoodii dhulka.”
Sidoo kale waxaa ku qeexan qoraalkii ka soobaxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya qodobka “Jihada Siyaasadda Itoobiya ee ku aaddan Soomaaliya” waxaa ku qoran “…nabad, dimuqoraaddiyad iyo horumar ay gaarto Soomaaliya waa dhibaatada Itoobiya..”
Arrimahaas oo jira, ka warran haddii safaarada Itoobiya ku dhex taal gudaha Villa Soomaaliya oo ah meesha looga arrimiyo Soomaaliya, sidaas waxaa yiri xog-ogaal weydiistey in aan magaciisa la xusin, waxana uu intaas raaciyay: “Safaarada Itoobiya waxay ku jirtaa Xeendaabka Xarunta Madaxtooyada, waxaa ka soo horjeeda Guriga Ra’iisul Wasaaraha, waxayna dhinaca ku haysaa Xarunta Nabadsugidda/sir-doonka Soomaaliya, waxaa Dhabarka dambe kaga dhegen wasaarada warfaafinta, Xafiiska Madaxweynaha waxaay u jirtaa Kun talaabo.”
“Waxaay safaarada Itoobiya noqatey meel ay Qayilaad u tagaan qaar kamid ah Xildhibaanada, wasiirada iyo Saraakiisha Ciidamada, taas oo ka dhigaysa in safaaradaasi si toos ah ula socoto Sirta Dowladda Soomaaliya oo dhan welibana ah.”
Xog-ogaalka ayaa intaas raaciyey “in raga Itoobiyaan ay ku milmeen Nabadsugida Soomaaliya ama sir-doonka Qaranka”
“Halkaas ay Safaarada Itoobiya ku taal waa halkii laga xukamayey Dalka Soomaaliya, safaaradaha kale waa ay ka fogyiin Xarunta Madaxtooyada, tusaale Safaarada Turkiga oo ah dal Soomaalida saaxiib lah waxay ku taal lambar Afar.”
“Waagii Dowladii Maxamed Siyaad waxaa ay la socon jirtey Dhaqdhaqaaqa Safaarada dalka ku yaal, oo waxaa loo xil saarey nabadsugid la socda. Hadda haddii Xildhibaankeenii ama masuuliyiin xilal haya halkaas ku soo qayilayaan oo Safiirka ama shaqaalaha safaaradaas looga sheekeynayo arrimaha Soomaaliya maxaa dalka u qorsoon, khilaafse maka dhammaanaysaa dawladda dhexdeeda?”
“Waa in Safaaradda Itoobiya laga raro Gudaha Villa Somalia, si looga hortago Khilaafka madaxda Soomaaliyeed… waana in Domain-ka .So xaruntiisa laga soo raro Japan…”
“Marka haddii la doonayo in laga hortago khilaaf kale oo soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra’iisull wasaaraha, waa in dawladdu ay safaaradda Itoobiya ka dhex saarto madaxtooyada dalka looga arrimiyo,” ayuu yiri, isagoo intaas ku daray: “Dhanka kale sirta dawladda Soomaaliya qaybta elektoonigu gacanta uguma jirto laga so bilaabo 2011, waayo Domain-ka Soomaaliya (.SO) ee ah kan emailadiisa ay dawladdu isticmaasho waxaa xarun u ah shirkad ajnabi ah oo xarunteedu tahay Japan. Taas oo marka laga soo tago ayadoo aan la aqoon meesha ay marto kharashka websiteyada tirada badan ee laga kiraystay, iyo ayadoo ciddii doontaa ay ka furan karto websiteyo anshax xun, waxaa dheer in xogta la marsiiyo .SO (sida emailada dawladda ee lingaxoodu yahay .GOV.SO) aysan ku kaydsanayn serverro yaal Xamar ee ay ku kaydsamayaan Japan,”.
Aamin darrada shacabka Soomaaliyeed ka qabo safaaradda Itoobiya ee ku dhextaal madaxtooyada, waxaa kale oo walaac ka muujiyey siyaasi aanaan ogolaansho u haysan in aan magaciisa xusno, kaas oo markii uu soo shaac baxay khilaafkii ra’iisul wasaare C/weli iyo madaxweynaha, wax laga weydiiyey ka warran haddii ra’iisul wasaare laguu magacaabo, waxa uu ku jawaabay “Xasan Shiikh waa is-naqaan, oo iima magacaabayo ra’iisul wasaare inta safaaradda Itoobiya ku sugan tahay gudaha Villa Soomaaliya, aniguna ma aqbaleen magacaabistaas,”.
Shirkii gobollada dhexe oo laga raray Cadaado loona wareejiyey magaalada
Odayaal ka kooban beelaha wada dega gobolada dhexe, gaar ahaan Galgaduud iyo Mudug oo shir ku yeeshey magaalada Muqdisho ayaa sheegey in shirka maamul u sameynta gobolada dhexe lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb.
Ugaas Axmed Daahir oo ka mid ah odayaashan shirey ayaa sheegey in shirkani uu yahay mid wada tashi ah, islamarkaasina wixii hadda ka horeeyey dadka deegaanka aysan isaga imanin in fikir mideysan ay ka qaataan shirka maamul u sameynta.
Waxa uu sheegey in halka shirka lagu qabanayo iyo qaabka wax loo dhisayo aysan ahayn wax u yaala beel gaar ah, tahayna wax beelaha walaalaha ah ee goboladaasi wada daga ay si wada jir ah oga arrinsadaan.
Gabogabadii shirka ayaa waxaa kasoo baxay go’aan ah in shirka lagu qabto magaalada Dhuusamareeb, halka markii hore dowladda Soomaaliya ay u qorsheysay in shirka lagu qabto magaalada Cadaado, halkaasi oo qabanqaabada shirka ay ka socotey.
Waxa uu sidoo kale shirkani imanayaa xili mas’uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan ay magaalada Dhuusamareeb ka wadaan qabanqaabada shirka, iyada oo la dhisey hoolkii shirarka iyo waliba meelo ay degaan ergooyinka shirka ka qeybgalaya.
Gudiga Farsamo ee Maamul u samaynta Gobolada Dhexe wali wax War ah kama soo saarin Hadalka Odayaasha sheegay in Madasha Shirka loo wareejiyay Magaalada Dhuusamreeb.
AKHRISO:-Ururka Shabaab oo faafiyay sirtii ugu yaabka Badneyd oo ay ka soo helen Xerada Xalane Iyo Afhayeenkii AMISOM Oo Xilka Laga Qaaday & Waliba Labo Siyaasi Oo Caan Ah oo Loo Xeray Werarkii Xarunta Xalane (Aqrsio Magacyadooda)﻿
Tani waa Fariin yar oo ka timid Mujaahidiinta gaar ahaan kooxda sirdoonka u ah kana hadleysa weerarkii shalay kaasi oo bartilmaamedkiisa uu ahaa xarunta ugu weyn ee Cadowga Soomaaliya- xalane ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku geeriyooden 17 qof oo isugu jira saliibiyiin,Saraakiil iyo laba qof oo cadaan ah.
Waxaa banaanka uga soo baxay Guryo ay ku dhexsuubsadeen xerada xalane saraakiisha Saliibiyiinta ah ka dib dagaalka oo aad u kululaa.
Safaarado kala duwan ayaa xalane ku dhexyaal kuwaasi oo ay ka mid yihiin safaaradaha Britten iyo talyaaniga.
waxaa kuyaal xalane Xarunta Ugu weyn ee sirdoonada ay ka midka yihiin CIA, M16 iyo MOSSAD.
waxaa kutaal xarunta Ugu weyn ee CIA da ay ku dhibaateynayeen Soomaalida oo ay dadka ku jir dilayeen.
waxaa kutaal xarunta ugu weyn ee ay CIA da ka Maamulaan diyaaradaha Drone ka Ee Soomaaliya Ka Howlgala
Weerarka ay mujaahidiinta ku qaaden Xerada Xalane maalin cad waxuu tusaaleynayaa saliibiyiinta, cadowga Afrikanka iyo saaxibadood reer galbeedka in aan bartil maamedka mujaahidiinta in uu ahaa Baabi,inta Cadowga.
Xaqiiqdii weerarka waxuu ahaa bartilmaamed aan ugu Aar gudeynay hogaamiyaheynii Ruuxiga ahaa sheikh Muqtar Abu Zubeyr oo ahaa Hogaamiyahii Hore ee xarakada mujaahidiinta Alshabaab allah ha u naxariistee.
Boqolaal Musliimin ah ayaa waxaa si naxariis daro ah oo micna dara ah loogu dhibaateyaa Xarumaha Saliibiyiinta loogu jirdilaa xabsiyada mugdigana loogu dhibaateyaa.
Allah Ayaa ku mahadsan weerarkii Xalane oo inoo suura galiyay in aan cadowga dhibaateyno waxaan gaarnay ujeedkeynii ugu weynaa ee ahaa in aan dhibaateyno saliibiyiinta iyo saaxibadooda dhibaatada ku haayo walaalaha muslimiinta.
Mujaahidiin badan ayaa allah mahadiis waxaay arkeen oo ay soo bandhigeen carbiskii ama tababarkii ay qaadan jireen waxaan sidoo kale allah uga mahad celineynaa in mujaahidiinta iyaga oo nabad qaba in ay dib ugu laabteen xarumahoodii ay ka soo weerar tageen markoodii hore iyagoo wax dhaawac ama qasaare ah aanay soo gaarin, waxayna hada isugu diyaarinayaan in weeraro kale ay ku qaadaan xarumaha loo arko in bartilmamedyada xiga in ay noqon karaan.
Dagaalkani waxuu fariin cad u dirayaa Saliibiyiinta Afrikaanka iyo isbaheysigooda Reer galbeedka ah waxaana leenahay kuma nabad galeysaan Dhulka Muslimiinta Ee Soomaliyeed Mujaahidiintana waxay allah u balan qaadayaan in meel welibaa ay diinkula dagaalamaan markale ayaa allah ka rajeyneynaa in sidaani oo kale in aan idiinku cadaabno Awooda naga iyo Awoodaha allah
Midowga Yurub oo war kasoo saaray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta Xalane .
War qoraal ah oo kasoo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in weerarkii Alshabaab khamiistii ay ku qaadeen fariisinka ciidamada AMISOM ee Xalane uu ahaa weerarada aan kala sooco laheyn ee Alshabaab ay ka geystaan dalka Soomaaliya, sida qoraalka lagu sheegay.
Warka qoraalka ee Midowga Yurub ayaa lagu sheegay inay tacsi ugu dirayaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi Alshabaab ay ku sheegeen inay ugu aargudayeen dilkii hogaamiyahoodii Sheikh Muqtaar Abuu Zubeyr.
Midowga Yurub ayaa dhaqaale ku bixiya ciidamada AMISOM iyo kuwa booliska taageerada ay siinayaan dalka Soomaaliya darteed, waxaana la sheegay inay sii kordhin doonaan taageerada ay siinayaan AMISOM.
Sidoo kale qoraalka Midowga Yurub, ayaa lagu sheegay inay soo kordhin doonaan taageerada ciidamada dowlada Soomaaliya, si guulo looga gaaro amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn midowga Yurub ayaa qoraalkooda ku sheegay inay ka go’an tahay taageerada shacabka Soomaaliyed iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen inay sii socon doonaan dadaalada iyo taageerada ay siinayaan dowlada Soomaaliya.
Weerarkii XALANE oo muujiyey awooda ciidanka SOMALIA, fashiliyey AMISOM
Ka dib weerar muddo laba cisho qaatay oo lagu qaaday Xarunta Ciidamada Amisom ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa adkaatay in Ciidamada Midowga Afrika ay u babac-dhigaan ilaa 10 wiil, oo sida la sheegay weerarkaasi soo qaaday. Waxaana kolkii dambe soo afjaray wiilal Soomaali ah oo ka tirsan Ciidanka Somaliyeed ee sida gaarka ah u tababaran.
Meeshaasi waxaa inooga soo baxday inaanay Amisom u bisleen inay si dhab ah ula dagaalanto wiilasha yar yar ee ka tirsan dagaal-yahanada Ururka mayalka adag ee Al Shabaab.
Dadka Somaliyeed, ayaa waxay jeclaan lahaayeen taageerada ballaaran ee lagu bixiyo Ciidanka Amisom, in bedelkeeda lagu bixiyo Ciidamada Somaliya, oo iyagu hanan kara ammaanka dalkooda.
Dadka waxaa u cuntami la’ in askari kasta oo Amisom ka tirsan uu bishii mushaar ahaan u qaato in ka badan kun dollar ($,1000), iyadoo askarigii Somaliyeedna loo waayay boqol dollar ($1,00), oo mushaar ah.
Xarumihii Dowladda Magaalada Muqdisho ee Shabaabku weerareen, ayaa waxay Ciidamada Somalidu kaga saareen muddo dhowr saacadood uun ah, taana ay u riyaaqday bulshada Somaliyeed, gacanta birta ah ee ay Ciidamadu kaga hortaggeen Al-Qaacidada Somaliya.
Xoogaga Midowga Afrika oo difaacan kari waayay Xaruntoodii ugu weyneyd ee Somaliya, ayaa waxaa adag in lagu aamino inay xaqiijiyaan ammaanka dalka iyo dadka Somaliyeed.
Haddii Caalamka uu taageero sax ah siinaayo dalka iyo dadka Somaliyeed, ayaa waxaa shacbiga Somaliyeed deeqi laheyd in taageerada lagu bixiyo Amisom la siiyo Ciidamada Somaliya, dibna Amisom loogu celiyo dalalkii laga kala keenay.
Iskusoo wada-duuboo haddii ay xaajadu sidaan sii ahaato, ayaa waxaan rajo badan laga qabi doonin doorasho xalaal ah, oo sanadka 2016-ka ka qabsoomto dalka Somaliya.
Gal-mudug iyo Puntland oo Hadalo Dagaal Hurin ah Hawada isku Marsiiyay
Maamulka Gal-Mudug ayaa sheegay in deegaanka Saaxo ee duleedka ka ah gobalka Mudug aanu ka jirin maamul Puntland ah, islamarkaana deegaankaasi uu ka mid yahay deegaanada loo dhisyo maamulka mideynayo gobalada Mudug iyo Gal-Gaduud.
Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Gal-mudug Cilmi Kulan Geedi ayaa sheegay in deegaanka Saaxo uu ka mid yahay deegaanada Gal-mudug, halka Puntland-na ay sheegtay war kaas ka duwan.
Cilmi Kulan ayaa u sheegay maamulka Puntland in aanay iska hor keenin dadka wada degan deegaankaasi, dadkaasina ay walaalo.
“Waan ka xunnahay runtii deegaan Puntland aanay wax ka deganeen in ay tirahdo shacab Puntland ah ayaa wax la yeelay, dadka Saaxo wada degan iyaga ayaa ehel ah, waxaan u jeedinayaa in aysan u ekaan dadka iska hor keenaya dadka walaalaha ah” ayuu yiri Cilmi kulan Geedi.
“Puntland ma maasho Saaxo, mana maamuli doonto” ayuu hadalkiisa raaciyey Cilmi Kulan.
Dhanka kale agaasimaha ayaa ku baaqay in shacabka ku wada nool deegaanka Saaxo ay ka fogaadaan dagaalada dhexdooda ah, islamarkaana nabadda laga wada qaato.
Dhawaaan waxaa deegaanka Saaxo gaaray mas’uuliyiin uu ka mid yahay Gudoomiyaha Puntland u qaabilsan gobalka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigeey, isaga oo halkaasi ka sheegay in deegaankaasi uu ka mid yahay Puntland.